सुनिता - Naughty Nepali
Home » Nepali Sex Stories » सुनिता
“वोहो, दुई बर्षमै कस्तो अर्कै हुनुभएछ बाबु त”, एरपोर्टमा लिन अाउनु भएको काकी ले मलाई देखेर भन्नु भो“ह्याण्डसम भएर अाएछ नि अमेरिका बाट”, काका ले थप्नु भयो“सप्पै म्याकडोनाल्को करामत हो काका”, मख्ख पर्दै मैले नि अाफ्नो बढाई हाँकेहुन नि अमेरिकाको हावापानी ले १८ बर्षे मेरो ज्यानलाई दुई बर्षमै अर्कै बनाईदिएको थियो। दुई बर्ष अगाडि अमेरिका जाँदा दुब्ले पातुले फू गर्दा ढल्ने जस्तो, अहिले स्कुलको जिम र के के जाती खाना खाएर लक्का जवान भएर नेपाल फर्किएको मलाई देखेर काका काकी आश्चर्यचकित किन नहुन। फेरि ज्यान स्यान पनि मिलेको, लम्बाई पनि लगभग छ फिट, अनुहार नि हेर्न लायकको, ताक परे फिल्मको हिरो नै बनुला जस्तै देखिन्थे।अमेरिकाको गफ गर्दै काका को गाडीमा काकाको घरमा पुगियो — सितापाईला मा। बुबा आमा र मेरा दाई दिदी सबै अमेरिकामै भएको ले १ महिने नेपाल भ्रमण काका कै घरमा बसेर बिताउने प्लान गरेको थिएँ। काका काकी वाहेक उनका दुई छोरा छोरी थिए। भर्खर ९, १० बर्षका।
काका काकी दिउँसो अफिस जाने, अनि बच्चा हरु सबै स्कुल जाने भएको ले अाफू प्राय एक्लै भईएला जस्तो थियो घरमा। भएका साथी भाई हरुपनि कता कता पुगिसकेका थिए्। कसरी एक महिना बिताउने होला भन्ने सोच्दै काकाको घर भित्र छिरियो। काकाको घर बडेमान को थियो, म अमेरिका गएपछि फेरि तल्ला थपेर झन् बडेमानको बनाएका रहेछन घर। त्यही घरमा एउटा कोठा हरीमाया दिदीलाई दिनुभएको रहेछ। हरिमाया दिदी को बुढाले हरिमाया दिदी र उनका दुई छोरीहरुलाई छोडेर दुबाई तिर लागेर उनीहरुको अलपत्र भएकोले काका काकीले उनीहरुलाई त्यही घरमा एउटा कोठा दिएर बसाउनु भएको रहेछ। ४० जति पुगेकी हरिमाया दिदी देख्दा असाध्यै राम्री थिईन — दुब्ली पातली, गहुँगोरी त्यस्ती राम्री हरिमाया दिदीलाई छोडेर दुबाई जाने उनका लोग्नेलाई धिक्कार्ने मान्छे हरुको कमी थिएन सितापाईलामा। अहिले त्यही तल कोठामा बसेर, काकी लाई खाना बनाईदिने, घर सफा गरिदिने अादी गरेर जिविका चलाउनु हुदो रैछ हरिमाया दिदी ले।
“नमस्ते है हरिमाया दिदी, सञ्चै हुनुहुन्छ?”, मैले सोधें।“कस्तो हिरो हुनु भएछ बाबु त”, हरिमाया दिदीले भनिन।“दिदीको छोरी हरु खोई त?”, प्वाक्क निस्कियो मुखबाट।“पढ्न गा छन्, अहिले अाउछन्, चिया पकाउ है बरु, थाकेर अाउनु भा छ, चिया परेसी थकाई मेटिन्छ”, हुन्छ भन्दै म काका हरुसंग गफ गर्न तिर लागे।गफसफ गरेर चियासिया सकिएपछि काकाले भन्नु भो — “ल हिड, म तिमीलाई तिम्रो कोठा देखाउछु”। काकाले मेरो लागि ठिक हरिमाया दिदी बसेको कोठाको पारि पट्टी व्यवस्था गरिदिनु भएको रहेछ। “ल यहि कोठा हो तिम्रो लागि, भित्र अट्याच् बाथरुम पनि छ, नुहाई धुवाई गर, अनि फेरि बसेर गफ गरुम्ला”। “हुन्छ, म नुहाई हाल्छु, बरु हरिमाया दिदीलाई भन्नु न, अर्को एक कप चिया खाम भनेर, चिया नखाएको नि कत्ति भो कत्ति” भन्दै कोठा तिर लागे। कोठा नि बडेमानको र सफा रहेछ। कोठा भित्र छिरेर तुरन्तै बाथरुम तिर लागि हालें — नुहाउनलाई। नुहाएर दश मिनेट जतिमा टावल बेरेर बाथरुम बाट बाहिर अाए। त्यत्तिकैमा ढोकामा कसैले नक गर्यो। बिस्तारै ढोका खोलेर हेरेको त बाहिर एउटा केटी हातमा चिया बोकेर बसि रहेकी रहेछ। मलाई टावलको साथमा देख्ने बित्तिकै रातो गाला पारेर भनि “नमस्ते, म सुनिता, हरिमाया दिदीको छोरी”।
सुनिता — दुई बर्ष अगाडि मात्रै बच्चा जस्तो लाग्ने सुनिता — अहिले त जवान भईछि। गोरी, अल्गी, दुब्लि पातली, हेर्दै स्वर्ग बाट अप्सरा झरेकि जस्ति। म त ट्वाल्ल हेरेको हेरै भए सुनितालाई देखेर। एक सेकेण्ड लाग्यो होला उसको ज्यानको बिष्लेशण गर्न — हरियो कुर्ता सुरुवाल लाएकी, लामो कपाल सलक्क छोडेकी, चमकिला अाँखाहरु, रसिला होठ हरु, कुर्ता च्यातेर बाहिर निस्कन तैयार भएका ती जवानीले भरिएका दुधका पोका हरु — एक छिन त लाग्या थियो त्यहि उत्तानो पारिदिउ मोरीलाई। उता टावलको मुन्तिर स्यानो भाईलाई नि उकुस मुकुस भई सक्या थियो सुनिता लाई देखेर। मुस्किल का साथ अाफुलाई सम्हाल्दै भने “सुनिता? हिरोईन भएछौ नि त तिमी त”। लाजले भुतुक्कै भएर हाँस्दै भनि, “नुहाई सक्नु भा भए माथि आउनुस रे, काकाले भन्नु भा” — भन्दै गायब भईन, सुनिता। आफ्नो दिमागमा भने एउटै कुरा खेलिरहेको थियो — “यल्लाई हान्न पाए कति मजा आउने होला”।
नुहाएर माथि गएँ। काकाको छोरा छोरी पनि आईसकेका रहेछन् — स्कुल बाट। सुनिताको बहिनी रमिता पनि फर्कि सकेकि रहिछन्। त्यो पनि ठूली भई छ भन्ने अड्कल लगाएँ — छाती को नाप हेरेर। दिदी जस्तै राम्री भईछ। काकाको किचन, डाईनिंग रुम र लिभिंग रुम सबै संगै जस्तै थियो। काका र केटाकेटी हरु लिभिंग रुम मा टिभी हेर्दै गफ गर्दै थिए। सुनिता, काकी र हरिमाया दिदी किचनमा खाना बनाउने तिर तल्लिन थिए। सुनिता ले मलाई देख्ना साथ मसक्क मस्कि। सुनिता मस्किएको देखेर जोश जाँगर बढेर आयो — किचन तिरै हल्लिन थाले — काकी, हरिमाया दिदी संग गफ जमाउदै। एत्तिकै मा सुनितालाई सोधे, “अनि तिमी के गरि रा छौ नि?”“कलेज जान्छु” सुनिता ले भनिन“कुन कलेज?”, “शंकर देव, फर्सट यर”।
यसै गफ गर्दै थिए सबै जाना संग। सुनितालाई सानै देखुन चिनेको भएर कसैले मतलव पनि गर्दैन थिए। काकी र हरिमाया दिदी कहिले काहि किचन बाट बाहिर पुग्नु हुन्थ्यो। त्यस्तै किचनमा म र सुनिता मात्रै भएको बेलामा मैले सोधें।“अनि तिम्रो BoyFriend को के छ नि हालखबर”रातो मुख लाउदै सुनिताले सोधिन “को boyfriend? छैन मेरो कोईपनि”जब जब सुनिता लजाउथिन्, मेरो जिउमा झनक्क हुन्थ्यो।“तिमी यस्तो राम्री छौ, ब्वाईफ्रेण्ड नहोला त?”, मैले सोधें“छैन मेरो त, बरु तपाईकै होला नि, अमेरिेका मा”, सुनिता ले भनिन“अमेरिकामा भएर के गर्नु, यहाँ त एक्लै छु नि, यहाँ GF भएको भए राती तकिया समातेर सुत्नु पर्थ्यो होला त?”, मैले भने।“छ्या तपाईपनि”, रिसाएर भनि सुनिताले। रिसाएपनि मुसुमुसु हाँसेको देखेर मैले कुरा अघि बढाएँ — “बरु तिम्रो साथीहरु होलानि कलेजमा, यस्सो टाईमपास हुन्छनि नेपालमा बसुन्जेल, मिलाईदेउ न”हाँस्दै भनि सुनिताले “हुन्छ मिलाईदिउला, हामी पनि त छौं नि तपाईको टाईमपास गराउन” — प्वाक्क बोलिन सुनिता। के सोचेर त्यसो भनेकि हुन् मैले बुझ्न सकिन, तर मन्-मनै लाग्यो अाउने दिन हरुमा मेरो “टाईमपास” राम्ररी हुने भो। यत्तिकैमा किचनमा काकी अाउनु भयो, सुनिता र मेरो गफ त्यहि टुंगियो।
त्यो गफ पछि सुनिता अलि बद्लेको जस्तो लाग्न थाल्यो। डाईनिंग टेबलमा छिन छिन मा यो खानु, त्यो खानु भनेर खाना थप्न ल्याउने, खाना थप्दा उसको जिउ म तिर टस्याउन ल्याउने — लाग्यो साँच्चै जवानी चढेछ सुनिता लाई। भोलीपल्ट सुनिता कलेज जान लाग्दा मैले म पनि जान्छु तिमीसंगै — काठमांडौ कति बद्लेछ हेर्नु पर्यो, फेरि सितापाईला देखुन शंकरदेवसम्म कसरि गईन्छ, त्यो पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। काकी ले पनि सहमती देखाउनु भयो — सुनिता मन् मनै खुशी भएको उसको अाँखामै देखियो।
शंकरदेव कलेज पुगेपछि मैले सोंधे “कति बजे छुट्टि हुन्छ तिम्रो? म यहिं अाईपुग्छु, संगै घर जाँउला, हुन्न?”“दुई बजे”, सहमती जनाउदै सुनिताले भनिन।
दुईबजे शंकरदेव पुगें — त्याहाँ बाट हिड्दै सुनिता र म निउँरोड तिर गयौं — एउटा रेस्टुराँ मा खाजा खायौं। बिस्तारै बिस्तारै सुनिता म संग नजिक हुदैं गएको भान गरें मैले। हिड्दा पनि टास्सिन खोज्थि म संग।घरमा पनि जानी जानी टाँस्सिन अाँउथी, पर बाट मलाई हेरि रहन्थी, मैले हेरें भने लजाएर अरु तिरै हेर्थि। एकचोटी मैले जानी जानी झुक्केको जस्तो गरेर उसको पोका मा हात पुर्याए, त्यसपछि त झन् पोकै टस्याउन ल्याउन थालि। अचानक मलाई उसको BF जस्तै ट्रिट गरेको अाभाष गर्न थाले मैले।
नेपाल पुगेको पाँच दिन भै सकेको थियो। शनिवारको दिन, काका काकी बच्चाहरुलाई लिएर मन्दिर जानु भएको रहेछ। घरमा हरिमाया दिदी, सुनिता, रमिता र म मात्रै थिए। बिहानी को ९ जति बजेको होला। हरिमाया दिदी र सुनिता किचनमा खाना तैयार गर्दै थिए, रमिता भने तल अाफ्नै कोठामा थिइन। म लिभिंग रुममा चिया पिउदै टिभी हेर्दै बसि रहेको थिए। म बसेको ठाँउबाट किचनमा सुनिता लाई राम्ररी देख्दथे। टिभी भन्दा बढि ध्यान मेरो सुनिता तिरै थियो। टाईट निलो कुर्ता सुरुवाल लगाएकि थिइन सुनिताले। त्यो कुर्ता सुरुवालमा एकदम सेक्सी देखिएकि थिईन। उसको ढाड म तिर फर्किएको थियो। एक टाईम सुनिता सिलौटा निकाल्न टुक्रुक्क बसिन, कुर्ता अलि माथि तिर फर्किएकोले उसको टाईट सुरुवाल राम्ररी देखिन्थ्यो। टाईट सुरुवालमा उसको गोलो चाक को अाकार देखेर मेरो सानो भाई टिनिक्क भयो। त्समाथि उसको छिनिएको कम्मर, ढाडको आकार, उस्को नांगो गर्दन देखेर सहि नसक्नु भई रहेको थियो। झन् त आगोमा घिउ थप्ने गरि सुनिता टुक्ररुक्क बसेर म तिर फर्कि — तर उसले भने मलाई देखिनन्। सिलौटा म तिर फर्काएर सिलौटा मा अदुवा लसुन पिस्न थालि — पोका हल्लाउदै — लाग्यो, त्यो पोका कुर्ता बाट फुत्त झरेर कुनैपनि बेला सिलौटा मा पुग्छ। मलाई सकि नसक्नु भई सकेको थियो त्यो दृष्य देखेर — हुने भएको भए त्यहि किचनमा उत्तानो पारेर बजाईदिउ जस्तो नि नलाग्या होईन। शायद त्यो पनि गर्थे होला घरमा कोही नभएको भए।
सिलौटा को काम सकेर सुनिता उभ्भिइन, अनि आलु छोडाउन थालिन। कही छिन पछि हरिमाया दिदीले सुनितालाई भन्नु भयो — “ल, सब्बै पाकिसक्यो, तँ आलु छोडाएर तरकारी बना, म नुहाएर आउछु”।सुनिता ले टाउको हल्लाईन अनि आमालाई भनिन “त्यो धनिया त सक्केको रैछ, मासुमा धनिया हालेन भने नमिठो हुन्छ, रमितालाई लिन पठाउनुस न”। हरिमाया दिदीले हुन्छ भनिन् अनि तल तिर लागिन। एकै छिनमा रमिता घरबाट धनिया किन्न निस्केको मैले माथिबाट सुने। केही छिन सुनसान भयो अनि बाथरुमको सावर चलेको आवाज आउन थाल्यो। अब माथिल्लो तल्लामा सिर्फ म र सुनिता मात्रै थियौ। सुनिता आलु छोडाउन मै मस्त थिईन — म चाही सुनिताको चाक को गोलाई हेरेरै मस्त थिएँ। मौका मा चौका हान्ने मौका यही हो भन्ने सोचेर म सोफा बाट उठेर बिस्तारै सुनिता तिर लम्के। सुनिताको ढाड म तिर फर्किएको थियो। बिस्तारै म सुनिताको नजिक पुंगे। सुनिता गुनगुनाई रहेकि थिईन, कुनै हिन्दि गीत।
अब उ र म बिचको दुरि सिर्फ १ फिट जति थियो — उसको जिउको बास्ना वातावरणमा स्पस्ट थियो। उसको अंगको नजिक पुग्दै मेरो जिउमा ४४० भोल्टको बिजुली चल्न थालि सकेको थियो — अचानक मैले सुनितालाई च्याप्प समाते र उसको गर्दनमा चुम्बन बर्साउन थाले। सुनिताले आत्तिएर छुरि र आलु भुईमा झारिन अनि चिच्चाउनै लागेकिथिन, मैले उसको मुख थुनिदिए र “sshhh” भन्दै मेरो दाईने हात उसको छातीमा राखे र अर्को हातले चाकको प्वाल, सुरुवाल को बाहिरै बाट सहलाउन थाले — मेरो ओठले अझै उसको गर्दनको चुम्बन लिदै थियो। “के गरेको यस्तो, कसैले देखे भने”, सुनिता ले आत्तिदै सोधिन। मैले केहि बोलिन, बदलामा मेरो देब्रे हात का औलाहरू बिस्तारै चाक तिर बाट उसको योनीतिर पुर्याए र सुरुवालको बाहिरैबाट उसको योनीको खाल्टोलाई सहलाउन थाले।मेरा दाईने हात भने कुर्ता को बाहिर बाट बिस्तारै उसको कुर्ता को भित्र पुगेर उसको देब्रे पोका सहलाउदै थिए। बडेमानको आँप जस्ता थिए उसका दुधका पोका — तातो तातो दुधका पोका। मेरो ओठ र जिब्रो अब उसको कानको पछाडि पट्टि र गर्दन तिर चुम्वन गर्न ब्यस्त थिए मेरो स्यानो भाई पाईन्टकै भित्र बाट सुनिताको चाकको प्वाल नजिक सल्बलाई रहेको थियो। करिब दुई मिनेट जति बेस्करि दुध र योनी माढे पछि मलाई उसको योनीबाट पानी आईरहेको आभाश भयो। अनि मैले उसलाई म तिर फर्काए। मेरो एउटा हात अझै उसको योनी माढ्नै ब्यस्त थियो। उसको डराएको अनुहार मा उनि झन् सेक्सि देखिएकि थिईन। मैले मेरो हातलाई उसको सुरुवालको भित्र छिराए — पानी ले भिजेको उसको योनी, अनी मेराे माझी औला बिस्तारै उसको चिप्लो योनी को प्वाल भित्र बाहिर गर्न थाले। “आह आह, प्लिज नगर्नुस न आह”, सुनिता बर्बराउदै थिईन, मैले मेरो ओठ उसको ओठ मा राखिदिए र अर्को हातले उसको कम्मरलाई समाते। औलाले उसको योनीमा भित्र बाहिर गर्दै म उसको ओठहरु चुस्न थाले। कति मिठा ति ओठहरु। ओठ चुम्दा चुम्दै मैले मेरो जिब्रो लाई उसको मुख भित्र छिराएर उसको जिब्रो संग मेरो जिब्रो खेलाउन थाले। उता मेरो माझि औला उसको योनि भित्र बाहिर स्पिड बडाउदै गर्दै थियो। सुनिता “आ आ” गर्दै भुईमा बस्न खोज्ने, कतै आड लगान खोज्ने प्रयत्न गर्दै थिईन, मैले भने उसको कम्मरसमातेर उसलाई बस्नै दिईन र झन जोडले योनीमा औला भित्र बाहिर गर्दै उसको जिब्रो चुस्न थाले। सुनिता “उ, उ” गर्दै थिईन। ५ मिनेट जति पछि उसको योनिले पानी छोडेको अाभाष गरे “आ आ आ”, तर मैले उसको योनीमा मेरो औला भित्र बाहिर गर्न छोडिन। केहि मिनेट भछि तल ढोका खुलेको आवाज आयो, मैले सुनितालाई त्यही भुईमा बसाँए अनि गएर टिभी हेर्न थाले। सुनिताको बहिनी माथि आईन, “ई धनिया, के भो तपाईलाई, किन भुईमा बसेको?”, रमिताले सोधिन। “खई, टाउको झननन्न भयो, अनि बसेको, केही मा छैन” म तिर हेर्दै सुनिताले भनि।मैले मुसुक्क हाँस्दै उसको योनीमा छिरेको औला चुसे र परैबाट सुनितालाई चुम्बन गरे। एउटा लडाई त जितियो, अब सुनितालाई हान्न मात्रै बाँकी छ, तर कहाँ हान्ने? घरमा हाने सबैले थाहा पाँउछ, बाहिर लगेर कहाँ हान्ने? मेरो दिमागले सोच्न थाल्यो। सुनिता ले चाखि सकिन, अब यसलाई सानो भाई नि चखाउनु पर्छ — कुनै स्पेसल ठाँउमा — यहि सोच्दै थिए, घरमा काका हरु फर्किए, घर फेरि भरियो — सुनिता र मेरो बिच भएको घटना कसैले थाहा पाएनन्।
सुनिता र म बिच भएको “घटना” पनि २ दिन पुरानो भई सकेको थियो तर अझै उसलाई न त हान्न पाएको थिए न त कहाँ लगेर हान्ने भन्ने कुरा दिमागले सोच्नै सकि रहेको थियो। तर त्यो घटना पछि सुनिता धेरै तडपि रहेको मैले महसुस गरे। कहिले सुनितालाई एक्लै देखेर च्याप्प समाउथें, कहिले चुम्बन दिन्थे, पोका खेलाउथें, माल लाई सहलाउथें, र सुनिता केही भन्दिन थि, खाली लजाएर मुस्कुराई रहन्थी। हुन त सुनितालाई उत्तानो पारेर फटाफट बजाउने मौकाहरु नभेटिएको होईनन, तर १०-१५ मिनेटमा काम तमाम गर्ने, त्यो पनि कोही अाई पुग्ला कि भन्ने डरै डरमा — बरु कुरेर एउटा स्पेसल ठाँउमै लगेर बजाउछु भनेर म पनि धैर्य गरेर बसें। एउटा त्यस्तै मौका एक रात कौशीमा भेटिएको थियो। झिस्मिस साँझ परिसकेको थियो, म र काका कौशीमा बसेर बियर खादैं गफ गर्दै थियौं। एउटा बियर सकेर काका टिभीमा समाचार हेर्न भनेर तल तिर लाग्नु भयो। काका जानु भएको ५ मिनेट पछि सुनिता कौशीमा अाईपुगिन, सुकाउन राखेको लुगा बटुल्न। सुनितालाई म कौशीमा थिए भन्ने कुरा थाहा थिएन। म कौशीको अर्को कुनामा थिए जहाँ बत्तीको लाईट पुग्दैन थियो। सुनिता चाँही बत्ती भएको साईड मा थिईन। सुनिताले सेतो कटनको कुर्ता सुरुवाल लाएकि थिईन र पोका हरुलाई कुर्ता सुरुवालको सेतै सल ले छोपेकि थिईन। म बिस्तारै सुनिता तिर लम्के र उसको अगाडी पुगेर बोलाँए, “सुनिता”। म चाहन्न थिएँ सुनिता डराओस भनेर। सुनिताले म तिर फर्किएर हेरिन्। यत्तिकैमा मैले सुनिताको हात समाते र “यता अाउ” भन्दै तानेर म बियर खाई रहेको ठाँउमा लगें। म कुर्शीमा बसें र सुनितालाई मेरो तिघ्रामा बसाँए। सुनिताको मुख म तिर फर्किएका थिएँ — उनका हातहरु मेरा हातहरु माथि थिए — उसका पोकाहरु मेरो नाक को हाराहारी मा थियो। मैले सुनितालाई बिस्तारै अाफ्नो नजिक ताने र उनका अोठहरु चुम्न थालें, जिब्रो चुस्न थालें। बिस्तारै मैले सुनिताको दाईने पोका कुर्ताबाट बाहिर निकालें र चुस्न थाले — अाँप चुसेको जस्तो — “कोई अाउलान, छोड्नुस् न”, सुनिताले भन्दै थिईन, मैले नसुनेको जस्तो गरेर पोका चुसि नै रहें। पोका चुस्दै मैले भने “भोली म होटलमा कोठा लिउँ?”, “राती?” सुनिताले सोधिन।“राती हैन, दिउँसो”, मैले भनें।“दिउँसो त कलेज छ”, सुनिताले भनिन।“एक दिन कलेज छोडेर के हुन्छ?” मैले सोधें।“भोलि त मिल्दैन, पर्सि?” लजाएर मलाई सोधिन्। अागो नराम्रै लाग्या रैछ सुनिताको मालमा भन्ने सोचेर मैले भने, “ल ठिक छ, पर्सि सही”। यत्तिकैमा तलबाट सुनिताको बहिनीले सुनितालाई बोलाईन। मेरो पोका चुसाई त्यही समाप्त भयो। पर्सि को आशै आशमा मैलै त्यही कौशीमा मेरो स्यानो भाई निकालेर एक ठ्याक हानेर तल आई काका संगै टिभी हेर्न थाले।
भोली भयो। बिहान उठेर होटेल पनि बुक गर्नु थियो, तर कुन होटेल, कहाँ, कसरी लिने केही थाहा थिएन। यस्तै सोच्दै थिए, मलाई मेरो कान्छो मामा को याद आयो। मामा पनि एउटा क्यारेक्टर नै थिए। हुन त म भन्दा दश बर्ष जेठो भएनी म अमेरिका जानु अघी मामा संग खुब घुमाई हुन्थ्यो। मामा कै कृपाले १६ बर्ष छदैं मेरो भर्जिनिटि सखाप भएको थियो, एउटा नेपाली गीतको म्यूजिक भिडियो मा खेलेकी मोडल संग, त्यो किस्सा अरु कुनै दिन सुनाउलाँ। बुढाले के गर्थे थाहा छैन, तर बुढाको पहुँच डरलाग्दो थियो। नेपालमा कुनै सरकार आएनि मामालाई खासै फरक परेको थिएन। अमेरीका बाट फर्किएर मामालाई भेट्न जाँदा माईजु मात्रै भेट भएको थियो, त्यही मौका पारेर मामालाई फेरी फोन गरें। “ये मुजी के छ तेरो”, मामा ले सोधे आफ्नो ट्रेडमार्क स्टाईलमा बोले पिछे “मुजी” हाल्दै।“ठिक छ”, मैले भने।केही बेरको गफ पछि मामाले भने, “मुजी म बिराट नगर जान ला अहिले, १ हप्ता जतिमा फर्किन्छु, अनि भेट्नु पर्छ मुजी, अहिले फोन राखि दिन्छु”।मामा हिडें भने त होटल पाउन नि गार्हो होला भन्ने सोचेर मैले प्वाक्क भने “मामा, मामालाई एउटा कुरा सोध्नु थियो, टाईम छ?”“सोध मुजी”, मामा ले भने।“त्यो सितापाईला बाट डेली किंग्स-वे तिर जान गार्हो भो, एक दुई दिन उतै किंगस्-वे मा होटेलाँ बसुँ कि भनेर सोचेको — अाफूलाई होटेल नि था छैन, मामालाई था छ कि भनेर नि”, मैले भने।“कैले चाहिने तलाई?” मामाले सोधे।“जहिले भएनि हुन्छ, आज भोली”, मैले भने।“ल म बिराट नगर पुगेसी खबर गर्छु तलाई” मामाले भनेर फोन राखिदिए।
मामा संग गफ गरेको ५ घण्टामा बुढाको फोन आयो — “ये मुजी, याक एण्ड यतीमा बस्छस?”।“मामा पैसा टन्नै लेला नि याक एण्ड यतिले, म त टुरिस्ट”, मैले भने।“मुजि पैसा कुरो नगर, म भा के काम?”, मामाले भने।“मख्ख परेर मैले भने”, हुन्छ उसो भे।
१५ मिनेट पछि फेरि फोन बज्यो “मुजी, याक एण्ड यतिमा जति बेला गएनी हुन्छ, मेरो नाम मा रुम छ, मेनेजरलाई भेट गएर, जत्ति बसे नि हुन्छ”। “थ्यान्क्स मामा” मैले भने। “म भा के काम मुजि? पवाँट नि पठाई दिउकि, एक्लै बोर होलास। त नेपालाँ छउन्जेल पवाँट तेरो गर्लफ्रेण्ड जस्तै तै संग बस्छे, जे गरे नि हुन्छ”, मामा ले भन्नु भयो। “होईन, अहिले ठिकै छ, चाहिए मामा लाई भनि हाल्छु नि” मैले भने र मामा संग बिदाबारी भए। त्यहि साँझ काका-काकीलाई म पोखरा जान्छु केही दिनलाई — भनेर गफ दिएँ।
भोली पल्ट बिहानै उठेर एउटा स्यानो झोलामा केही लुगा हरु हाले र सुनिता संगै घरबाट निस्किए। सुनिताले निलो कुर्ता सुरुवाल लगाएकि थिईन — अलि अलि मेकअपमा सार्है राम्री देखिएकि थिईन। “कहाँ जाने हामी?” बाटोमा सोधिन। “आज मलाई केही नसोध, मैले जता लग्छु तिमी उतै जान्छौ, मैले जे भन्छु तिमीले त्यही गर्छौ”, हाँस्दै मैले भने। घरबाट अलि पर अाएर एउटा ट्याक्सी लियौं अनि याक एण्ड यती होटल तिर लाग्यौ। होटलमा मेनेजरलाई भेटेर गफ गरेपछि १४७ नम्बरको कोठाको साँचो पाईयो — “हजुरलाई जे खानु पर्छ, जे चाहिन्छ, खाली अपरेटरलाई फोन गर्नुहोस, हामी हजुरको सेवामा उपस्थित हुन्छौ” मेनेजरले भने।मैले भने “थ्याङ्कस, अहिलेलाई ब्रेकफास्ट बाट सुरु गरौ”। मेनेजरले हामीलाई होटलको रेस्टुराँमा लगे र हामी संग बिदाबारी भए। मैले ब्रेकफास्ट अर्डर गरे र सुनितालाई हेरेर भने, “रेडी?”। केही नभनी मुसुक्क हाँसेर अर्कै तिर हेर्न लागि सुनिता। रेस्टुराँ मा केही विदेशी हरु मात्रै थिए, ब्रेकफास्ट खाँदै। “एता आउ सुनिता, म संगै बस न”, सुनितालाई भने। सुनिता मेरो साईडमा आईन र म संग टाँस्सिएर बसिन्। मेरो हातले सुनिताको तिघ्राको भित्रिभाग हरु सहलाउन थाले र उसको हात मेरो हातमा समातेर सुम्सुमाउन थालें। “पहिले कहिले गर्या छौ?”, मैले सोधे। “के गर्या छौ?”, मलाई सोधिन। “सेक्स”, मैले भने। “छैन”, सुनिताले भनिन। “गफ दिन्छौ, अचेल सबैले गर्छन, स्कुल मै हुदाँ” मैले भने। “धरोधर्म छैन, बरु तपाईले गर्नु भा छ?”, मलाई सोधिन। “गर्या छैन” मैले गफ दिए। “माथि जाने हो?” मैले सोधे। सुनिताले केही भनिनन्। ब्रेकफास्ट आधिमै छोडेर सुनिता र म रुम नम्बर १४७ तिर लाग्यौ। मन् मनै मैले सोचे, केही बेरमै मेरो स्यानो भाई सुनिताको योनी भित्र हुन्छ।
१४७ रुम भित्र छिर्ने बित्तिकै मैले ढोका लगाएर सुनितालाई च्याप्प समातेर चुम्न थाले। सुनिताले पनि मलाई चुम्न थालिन। कहिले सुनिताको जिब्रो मेरो मुख भित्र हुन्थ्यो, कहिले मेरो जिब्रो उनको मुख भित्र। मेरो हातहरु उसको पोकाहरु खेलाउदै थिए, उनका हातहरु मेरो कपाल सलबलाउदै थियो। ५ मिनेट जति किस गरेपछि, मैले उसको सुरुवालको ईजार फुकाल्न थाले। सुरुवाल भुई मा झर्यो।मैले घोडा टेकें र कुर्तालाई उठाए, उसको पेन्टिको दर्शन गर्न। सेतो सिल्की पेन्टिमा अलि अलि पानी रसाएको थियो। मैले मेरो नाक पेन्टि को माथिबाटै उसको माल तिर पुर्याए — कस्तो मिठो बास्ना उसको माल को। केहि बेर पेन्टि बाटै माल खेलाएपछि म फेरी उठें र उसलाई फेरी चुम्न थाले। बिस्तारै मैले उसको कुर्ता खोले। कुर्ता पनि भूईमा पुग्यो। अब उसको जिउमा खाली सेतो पेन्टी र सेतो ब्रा मात्रै थियो।मैले उसको जिउको सबै भागहरु चाट्ने, चुस्ने, चुम्ने गर्न थाले। त्यही क्रममा मैले मेरो टि-सर्ट पनि फुकालेर भुईमा फ्याके। मेरो जिनको प्यान्ट भित्र मेरो स्यानो भाई बडेमानको भई सकेको थियो। मैले सुनितालाई ट्वाईलेटमा लगे। उसलाई एेनाको अगाडी उभ्याएर पछाडी बाट बिस्तारै उसको ब्रा फुकालि दिए। उनका भोगटे जस्ता पोका हरु अब उदांग भै सकेका थिए। उसको पोकाहरु देखेर मलाई सही नसक्नु भयो अनि म उसका पोका हरु चुस्न थाले। त्यही क्रममा मैले प्यान्ट खोलेर सुनिताको हातलाई तानेर कट्टुको माथिबाटै मेरो स्यानोभाई को माथि राखिदिए। मेरो स्यानोभाई झन् सन्कियो। मैले बिस्तारै सुनिताको कट्टु भुईमा झारिदिए। अलि अलि झ्याउ उम्रिएको रहेछ उसको मालको वरिपरि। बिस्तारै मैले उसको झ्याउ हरु पञ्छ्याएर उसको योनी को दर्शन गरे — कस्तो राम्रो योनी — छुरीले एउटा स्यानो चिरा बनाएको जस्तो। साच्चै सुनिताले अहिले सम्म सेक्स गर्नु त परै जाओस, कान्छि अौलापनि भित्र छिराएको छैन जस्तो छ। सुनिता अझै उभ्भि रहेकि थिईन, मैले मेरो हात उसको टांगको बिचमा पुर्याएर मेरो नाडीले उसको माल माथि रगडन थाले। सुनिता आखाँ चिम्लिएर “उह उह” गर्न थालि। त्यही बेलामा मैले मेरो कट्टु फुकाले र भुईमा फ्याँके अनि सुनिताको हातलाई मेरो उदांग कण्डो माथि राखि दिएर तलमाथि गर्न थालें। सुनिताले झस्किएर आँखा खोलिन अनि मेरो कण्डो तिर हेर्दै भनिन “आम्मै, कत्रो रैछ”। मैले उसको ओठमा फेरी ओठ राखिदिए र दाईने हातको औला उसको योनी को १ ईन्च जति भित्र घुसाई दिएँ र भित्र बाहिर गर्न थाले। उसको हातले मेरो कण्डोलाई भित्र बाहिर गर्न थाल्यो। मैले उसको योनी भित्र बाहिर को स्पिड बडाउन थाले — “उह उह” सुनिता कराउदै थिईन। जति जति उनले भित्र बाहिर गर्थिन मेरो कण्डोलाई, त्यति म जनावर भएर जान्थे। मैले सहनै सकिन, उसलाई समातेर बाथरुमको बाथ-टबमा राखे — जनावरको पोजिसनमा — सुनिताले के के भन्दैथिईन, तर मैले केही सुनिन, उसको घुडां र हातहरु बाथटबमा टेकिएका थिए, मलाई जनावर जागेको थियो। त्यही पोजिसनमा मैले उसको हातहरु तानेर उसको कम्मरको पछाडीपट्टी ल्याएर समाते। अब उनी खाली घुडा ले बाथटब टेकिरहेकि थिईन। मैले एउटा हातले उसको हातहरु समातेको थिए, अर्को हातले उसको माललाई फट्याए र मेरो लौरो उसको योनीमा घुसाईदिए। “एेया दुख्यो, छोड्नुस मलाई”, सुनिता कराउदै थिईन। मैले नसुनेको जस्तो गरेर उसको योनीमा मेरो कण्डो बजाउन थाले। बाथटब भरी रगत बगी रहेको थियो। सुनिताले सहन नसकेर बाथटबमै गाला टस्याउन थालिन र रुन थालिन। मैले हानेको हानै गरे। मैले हानेको सहन नसकेर उ बाथटब मै लम्पसार परिसकेकि थिईन, तर मैले हानेको हानै गरे। बिस्तारै उसलाई मजा आउन थालेछ क्यारे अनि रुदै “उह, उह” गर्न थालिन। १० मिनेट जति हान्यो पछि मेरो झर्न लागेको थियो, मैले मेरो माल उसको योनी भित्रै राखि राखे र विर्य झर्न दिईन। विर्य झर्नलाग्दा ध्यान अर्कै तिर पुर्याउन मैले सावर खोले। सावरले बिस्तारै रगत पखाल्दै गयो। फेरी मैले सावरको मुन्तिरै उसको योनीमा बजाउन थाले। यस पटक उसलाई रमाईलो लागेछ क्यारे, “अलि बेस्कन” भन्न थालिन। मैले उसलाई अाफूतिर फर्काए, उसको खुट्टा लाई आफ्नो काँधमा राखे र बेस्सरी बजाउन थाले। “एेया, एेया, अझै बेस्सरी, आह अाह”, सुनिता चिच्याउन थालिन। एत्तिकैमा उसको योनी मेरो कण्डोमा टाईट हुदैं गयो, उनका हातहरुले मलाई अंगालो हालेका थिए, त्यहि अंगालोले मलाई तानेर मलाई सुनिताले किस गर्दै मलाई “आई लव यू” भन्न थालि। उसको आवाजपनि अलि बद्लेको जस्तो लाग्यो। सुनिताको निस्किन लागेछ भनेर मैले झन मेरो स्पिड बडाए। “आह आह आह आहहहहहहहहहहहहहहहहहहहह”, सुनिताको पहिलो अर्ग्याजम् होला, मैले पनि झन् स्पिड बडाएर र ड्याम कि ड्याम बजाउन थाले, केहि बेर पछि मेरो नि निस्किएला जस्तो भयो र मैले मेरो लौरो सुनिताको योनीबाट निकालेर सुनिताको हातमा राखिदिए र भित्र बाहिर गर्न लगाए। सुनिताले पनि कुरा बुझेछ जस्तो छ, उठेर मेरो पछाडि आई अनि हातले मेरो लौरो समातेर भित्र बाहिर गर्न थालि। १ मिनेट जति भित्र बाहिर गरेपछि मेरो नि निस्कियो। सिथिल भएर म र सुनिता सावर को मुन्तिरै बसि रह्यौं — १५ मिनेट सम्म — किस खादै, जिउलाई खेलाउदै। मैले सोंधे, “कस्तो लाग्यो त?”, “तपाई कस्तो बदमाश, जनावर जस्तै हुनुहुदो रहेछ, मलाई कस्तो दुख्या थ्यो”, सुनिताले भनिन। मैले भने “अर्को पटक म माया गरेर गर्छु”। हामीले फेरी किस खायौं अनि एक अर्काको जिउँमा सावुन लगाउन थाल्यौं।
chikeko katha, nepali sex, nepali sex story, sexy story in nepali, sunita lai chikeko
Nepali college girl image leaked
बिनीता दिदीबाट सुरु भएको कहानी – Part 4